प्रधानमन्त्रीद्वारा कुलपति र सदस्य सचिव नियुक्त – ::नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान::
प्रधानमन्त्रीद्वारा कुलपति र सदस्य सचिव नियुक्त
मिति २०७५ असोज २१ गते आइतबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कुलपति र सदस्य सचिव नियुक्त गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तेह्रथुमका गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई आगामी चार बर्षका लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो । यसैगरी सदस्य सचिवमा दैलेखका प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय ‘प्रेक्षित’लाई नियुक्त गर्नुभएको छ । उप्रेती यस अघि पनि सोही पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । यो उहाँको दोस्रो कार्यकाल हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलपति उप्रेतीलाई आइतबारै सिंहदरबारमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको छ । सदस्य सचिव प्रा. उपाध्यायलाई कुलपति उप्रेतीले पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनु भएको थियो ।
सपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले समाजलाई साहित्य र सांस्कृतिक हिसाबले उजिल्याउने काम गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली वाङ्मयका अनेक ढाँचालाई प्रतिष्ठानले प्रष्फुटन गराउनु पर्ने बताउनुभएको छ । “साहित्यिक अभियान, राजनीति, शासन सञ्चालन, उत्पादन र बोलिचालीका अनेक ढाँचालाई व्यवस्थित गर्ने काम प्रतिष्ठानको हो” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ ।
नेपालको सामाजिक मूल्यमान्यता विश्वमा नै अनुपम रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । नेपालमा जस्तो सामूहिक परिवार विश्वमा कतै पनि नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यो प्रणालीबाट धेरै संस्कार सिक्न सकिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका सांस्कृतिक पर्वहरूले सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुद बनाउने काम गरेको बताउनुभयो । सामाजिक रुपमा, पारिवारिक रुपमा कहिले कुनै प्रकारले द्वन्द्व, झगडा भइहाले पनि चाडपर्वले त्यसलाई पुनः स्थापित गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “दिदीभाइबीच झगडा भए तिजले मिलाइदिन्छ । दाजुभाइबीच झगडा भए दशैँले मिलाइदिन्छ । दाजुबहिनीबीच झगडा भए तिहारले मिलाइदिन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रा सामाजिक पर्वहरूले सम्बन्धलाई पुनःमर्मत गर्ने काम गरेका छन् ।”
नवनियुक्त कुलपति उप्रेतीले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई समग्र प्राज्ञिक उन्नयनमा अगाडि बढाउन आफू समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।